Ram Swarup - ဝီကီပီးဒီးယား
Ram Swarup (၁၉၂၀ မှ ၁၉၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၆) သည်အိန္ဒိယပညာရှင်၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်နှင့်စာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူပြန်လည်ရှင်သန်ရေးလှုပ်ရှားမှု၏အရေးအကြီးဆုံးအတွေးအခေါ်ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်အိန္ဒိယသမိုင်း၊ ဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များကြောင့်လူသိများသည်။ သူသည်ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူကဘာသာရေးကိုဝေဖန်သူလည်းဖြစ်တယ်။ Sita Ram Goel နှင့်အတူသူသည် Voice of India ပုံနှိပ်တိုက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူသည်အိန္ဒိယတွင်အစ္စလာမ်ကိုနားလည်ခြင်းစာအုပ်ကိုပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
Foreword to the republication of Sardar Gurbachan Singh Talib, ed.: Muslim League Attack on Sikhs and Hindus in the Punjab, 1947 (1991; the original had been published by the Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee, Amritsar in 1950), and also separately published as Whither Sikhism? (1991) 
Foi et intolérance: Un regard hindou sur le christianisme et l'Islam. Paris: Le Labyrinthe.
Ram Swarup Archived 11 May 2013 at the Wayback Machine.
Ram Swarup books
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Ram_Swarup&oldid=623187" မှ ရယူရန်
၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။